माओवादीका धेरै सांसद् एमालेमा आउँदै छन् : शेरबहादुर तामाङ ! « Bagmati Online
माओवादीका धेरै सांसद् एमालेमा आउँदै छन् : शेरबहादुर तामाङ !
रामेछाप । नेकपा एमालेका वाग्मती प्रदेश सहइञ्चार्ज शेरबहादुर तामाङले माओवादी केन्द्रका धेरै सांसद् पद त्याग गरेर एमालेमा आउन लागेको खुलासा गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले रामेछाप जिल्ला संगठन कमिटीले मन्थलीमा आयोजना गरेको जनप्रतिनिधिको भेला तथा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले अहिले पनि एकताकै पक्षमा रहेको र माओवादीका धेरै नेता एमालेमा आउने तयारीमा रहेका बताउनुभयो । ‘हेर्दै जानुस् धेरै जना माओवादी केन्द्रका सांसद्हरु सांसद् पद माया मारेर एमालेमा आउँदै हुनुहुन्छ’, तामाङले भन्नुभयो ।
प्रदेश सभाका १० जना, प्रतिनिधि सभाका चार जना र राष्ट्रिय सभाका दुई जना माओवादीका सांसद्हरु आफ्नो सांसद् पद माया मारेर एमालेमा आइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि एमालेमा आउने तयारीमा रहेका उहाँले बताउनुभयो । पार्टी एकताको नाममा नेकपा नामको पार्टीमा ऐजेरु पलाएको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा विघटन भएपछि त्यो ऐजेरु काटिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेता तामाङले तीन वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि नै अपनाउन नसकिएको बताउनुभयो । ‘एकिकरणको नाममा पार्टीमा ऐजेरु लाग्यो, केही काम गर्न सकिएन’, उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बल्ल पार्टी खुल्ला भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी खुल्ला भएर लागेका छौँ, अब यसले पार्टी जुरुक्कै उठ्छ, अब नयाँ एमाले जनताको बीचमा लोकप्रिय भएर फर्कने छ’, उहाँले भन्नुभयो ।